Ungayithatha kanjani i-baking soda yeshukela > Imithi
I-baking soda yesifo sikashukela njengendlela yokwelashwa
Ukwanda kwe-acidity yejusi esiswini kuholela ekugayweni kokukhubazeka, izinkinga zesibindi namanyikwe.
Uma isitho sokugcina sonakalisiwe, i-insulin encane iqala ukukhiqizwa. Kulokhu, i-hyperglycemia iyakhiwa, okungukuthi, ukugcwala okwenyuka kweglucose egazini.
Uma imbangela ingaqediwe, kuvela ushukela. I-Metabolism iyaphazamiseka, ngenkambo ende yesifo, kuba nzima ukwenza umsebenzi ube munye. Ukubuyisela i-acidity yejusi ye-gastric noma ukuyinciphisa, kusetshenziswa i-baking soda. Ngaphambi kokusebenzisa, kufanele uthintane nodokotela wakho ukuze ugweme izinkinga.
Ngathola ngengozi i-Internet engisindise impilo yami. Ngathintwa lapho mahhala ngaphendulwa ngaphendulwa yonke imibuzo, ngatshelwa ukuthi singaselapha kanjani isifo sikashukela.
Emavikini ama-2 ngemuva kwekhambi lokwelashwa, ugogo waze wamshintsha nemizwa yakhe. Uthe imilenze yakhe ayisasebenzi futhi izilonda aziqhubeki; ngesonto elizayo sizoya ehhovisi lodokotela. Sakaza isixhumanisi esihlokweni
I-baking soda ayinomphumela wokuqothula kuphela, kepha futhi ijwayiza nezinqubo ze-metabolic ngenxa yomphumela ezinso. Izitho ziqala ukufaka izinto ezibabayo, ezinciphisa inani leglucose egazini.
ukwehla kwe-acidity esiswini, ngenxa yokuthi kuqedwa ubuthi nezinto ezinobungozi, umthwalo osendleleni yokugaya ukudla uyancishiswa,
lapho usebenzisa i-baking soda ukuphuza, ukukhishwa kwamafutha kuyanda, okuconswa kancane, okuholela ekunciphiseni kwesisindo somzimba (okusetshenziselwa ukukhuluphala),
umphumela we-antibacterial, osetshenziselwa izinkinga zesifo sikashukela i-mellitus (isetshenziswe ngaphandle nangomlomo),
ukuhlanza izindonga zesisu, amathumbu,
Ukuqedwa kwesishayo senhliziyo, esivame ukuvela lapho kukhubazeka umzimba
i-alkalization of uketshezi lwebhayoloji, okuthi kuyo isifo sikashukela kuthambekele ku-acidosis (acid acid), njengoba kukhiqizwa imizimba ye-ketone ngesikhathi sobunzima.
Ukuqeda i-acidity ephezulu esiswini
Ngohlobo 2 sikashukela, imisebenzi eminingi yomzimba iyashintsha. Ukuqunjelwa kwejusi esiswini kuncike esigabeni lapho isifo sitholakala khona, ubunzima baso. Esigabeni sokuqala sesi sifo, imvelo ene-acid esiswini iyasebenza, i-pepsin ikhiqizwa ngobuningi. Ngokwelashwa kwe-insulin, lesi simo siyaqedwa. Umzimba uzama ukunxephezela ukusweleka kwe-insulin.
Uma lesi sifo singena esigabeni sokubola, i-acidity yesisu iyancipha. Kunama-enzymes ambalwa emzimbeni. Lokhu kuholela ekunciphiseni kokuhamba kwamathumbu, ithoni yemisipha yesisu. Inani le-enzymes yokugaya (gastrin, secretin) liyancishiswa.
Nge-acidity ekhuphukile yejusi esiswini, kuvela ukushisa kwenhliziyo, ubungozi be-gastritis, ukuguguleka kwezilonda, izilonda odongeni lwesitho luyanda.
Isifo sikashukela, ama-microcracks ajwayele ukuvela emgodini wesisu, ongapholi isikhathi eside ngenxa yokuba khona kwalesi sifo. Isixazululo se-Soda sisiza ukuvikela ama-bacterium angama-fungal kanye namagciwane ukuthi angangeni ezilondeni.
Izilonda ziyavela futhi esikhunjeni. Ukuvimbela ukutheleleka ukuthi kungangeni ku-abrasion, isilonda siphathwa kabili ngosuku. Ukuqoqwa kwento kwisixazululo kufanele kube buthakathaka. Umphumela omuhle ubonwa ngemuva kwezinsuku ezintathu. Ngemuva kwalokhu, ukuvuvukala kuyaqedwa. Isilonda siyapholisa.
I-Soda enesifo sikashukela isiza kuphela uma umuntu enamathela ekudleni ngaphandle kwama-carbohydrate futhi adle kahle.
Ekuqaleni kokusebenzisa i-soda ukucisha i-acid esiswini, qala ngemithamo emincane. Umthamo wokuqala: I-Soda esiqongweni sesipuni ifakwa engilazini eyodwa yamanzi. Okuqukethwe kwengilazi kudakiwe ngokunye. Inqubo kumele yenziwe ngaphambi kokudla ukudla.
Ngokuvela kokuphazamiseka kwengqondo i-dyspeptic (Ubuhlungu besisu, isicanucanu, ukugabha, ukuthambisa okhubazekile), ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa kukhanseliwe. Uma ukwephulwa kungaveli, ngemuva kosuku umthamo unyuselwa ku-½ ithisipuni. Isixazululo sidliwa kanye kuphela ngosuku. Ngemuva kokuphothula izifundo, udinga ukuthatha ikhefu lamasonto ama-2.
Ngakho-ke, kwenziwa izifundo ezi-3 zokwelashwa. Ngemuva kokugcina, udinga ukubona udokotela, enze izivivinyo zaselebhu ukuhlola ukusebenza kwale ndlela.
I-Soda iyasiza ekwelapheni isifo sikashukela, kepha, njenganoma iyiphi into, kukhona ama-contraindication ekusebenziseni kwayo.
ukungahambi kahle komzimba, ukungakwazi ukubekezelela,
ukuba khona kwe-neoplasms enobungozi,
ukuphazamiseka kwenhliziyo okuholela ekwandeni kwengcindezi yegazi,
Izifo ezimbi zepheshana lesisu (ukuguguleka kwezilonda, izilonda, ukugcotshwa),
Izifo ezihlelekile ezisezingeni lokuthi zande,
ukumbiwa kwehlisiwe kwe-hydrochloric acid ne-pepsin, kunciphe i-pH yejusi yesisu,
ukuthatha imishanguzo edambisa imiphumela kasawoti.
Esikhathini sikashukela i-mellitus, kufanele uqaphele nganoma yini esetshenziswayo. Ngaphambi kokusebenzisa ikhambi le-soda, thintana nodokotela wakho.
I-Baking soda usawoti we-asidi we-carbonic acid nesodium, esivame ukubizwa ngokuthi yi-sodium bicarbonate. Kubukeka njengompuphu omhlophe ocolekile. Ngaphezu kokusetshenziswa kwendabuko embonini yokupheka neyokudla, ukusetshenziswa kwe-baking soda nakho kwakudingeka kwezokwelapha. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, kusebenza kakhulu ekunciphiseni ukushiswa kwangaphandle kwesikhumba noma ukushiswa kolwelwesi lwama-mucous ngama-asidi ahlukahlukene anobuthi. Ngokwesisekelo esingaphandle, isoda ifakwa kuzixazululo ezi-buffer ezahlukahlukene, ngoba ngisho noma kunokwahluka okuningana kokuxineka kwabo, i-sodium bicarbonate ihlala icishe ingaguquki ku-acidity.
Le powder akufanele ithathwe njengeyingozi kwisitoreji noma empilweni. Kuyinto ayinabo ubuthi ngokuphelele futhi ayizibolekisi ngokushiswa, kepha akufanelekile ukuvimbela ukungena kwayo okujwayelekile emgudwini wokuphefumula, ngoba ngokuhamba kwesikhathi lokhu kuzoholela ekucasukeni kwabo. Ngokuqondene nezakhiwo ezizuzayo zesoda yokubhaka, ukuhlukahluka kwabo sekudingekile empilweni yansuku zonke:
embonini yamakhemikhali, isoda isetshenziswa ekwenziweni kwe-polystyrene, ama-reagents ahlukahlukene, udayi, izicishamlilo kanye nemikhiqizo eminingana yamakhemikhali yasendlini,
embonini elula, i-soda ibaluleke kakhulu ekwenziweni kwemikhiqizo yesikhumba enjoloba neyenziwe ngokudalwa, kanye nasekudalweni kwezindwangu ezahlukahlukene,
embonini yokudla, i-sodium bicarbonate iyadingeka ekubhekeni isinkwa naseContectionery, kanye neziphuzo eziningana.
Ukusetshenziswa kwempuphu okwenziwe ngeso lengqondo kuyinto ejwayelekile kuyo yonke inkosikazi yendlu. I-Soda i-universal baking powder ekubhakweni, ngoba ikhipha isikhutha ngesikhathi sokushisa okushisa. Kwesinye isikhathi kufakwa kwi-baking powder eyinkimbinkimbi ngomthamo oqinile, kepha uma isetshenziswa ngendlela yayo emsulwa, kudingeka uqaphele ukuze ungawudli ngokweqile, ngaphandle kwalokho indishi eseqediwe izonambitha njenge-sodium carbonate.
Imiphumela yesoda emzimbeni wesifo sikashukela
Njengoba wazi, ngesifo sikashukela sohlobo 2, i-pathologies engemihle ingathinta cishe zonke izinhlelo zomzimba, kufaka phakathi i-endocrine, ukugaya kanye nenhliziyo, kanye nezinso nesibindi. Uma unikezwe lelo gastritis noma isilonda esiswini, okuvusa ukubonakala kwe-acidity ephezulu, singabalingani besikhathi sikashukela, kuzosiza ukusebenzisa i-baking soda, ehlisa lesi sikhombisi. Ngaphezu kwe-acidity, i-sodium bicarbonate nayo isiza ngenkuthalo ngobuhlungu besisu nokushiswa yinhliziyo, ithathe izidakamizwa ezibizayo nezingasebenzi.
Ngaphezu kwalokho, iqiniso elaziwayo lokuthi abantu abanesifo sikashukela abanesifo esithuthukile bahlukunyezwa ukulimala kwesikhumba, futhi isifo sikashukela sonyawo siyisifo esibucayi kakhulu - okuyinkimbinkimbi ye-pathologies eholela ekuthuthukisweni kwezinqubo ze-purulent-necrotic, ukutheleleka kanye nokulimala kwezinyawo. Njengasesimweni sokusikeka eside okungapholi kanye namanxeba esikhunjeni sezandla, i-baking soda ekulesi simo izoba wusizo ekusetshenzisweni kwangaphandle, ngoba kuzonciphisa ukulimala kwesikhumba futhi kusheshise ukuvuselelwa kwezicubu, ukuvimbela ukwanda kokuqina kwesifo. Lokhu kuholela esiphethweni esinengqondo sokuthi i-baking soda nohlobo lwe-2 sikashukela kuyimicabango ehambisanayo ngokuphelele uma eyokuqala isetshenziswa ngobuhlakani.
Ekugcineni, ukuphuza i-soda kushukela kungabuye kusetshenziselwe ukuqinisa amazinyo: i-sodium bicarbonate inomphumela wokubulala amagciwane koqweqwe lwawo nasezinsini. Kwaziwa futhi isikhathi eside ukuthi i-soda ingaqubuka nge-tonsillitis ne-pharyngitis ukuze kusheshiswe ukululama.
Ungayisebenzisa kanjani i-baking soda yeshukela?
Ukwelashwa kweshukela ngoshukela kufanele kuqale ngokusetshenziswa kwempuphu ngamanani amancane ngaphakathi. Ekuqaleni, umthamo akufanele udlule igremu eyodwa nohhafu obekwe esicongweni sentambo yetafula. I-Soda kufanele ichithwe engxenyeni yengilazi yamanzi abilayo, bese ufaka enye ingxenye yengilazi yamanzi abandayo bese ugaya esiswini esingenalutho. Uma kungekho ukusabela okungekuhle komzimba ngosuku lokuqala, singaphetha ngokuthi isiguli asinakubekezelela, okusho ukuthi ungaqala ukwelashwa ngesifo sikashukela ngesoda. Ukwelashwa okujwayelekile nge-soda kuthatha izinsuku eziyi-14 enkambweni eyodwa, njengoba ikhula, umthamo kufanele kancane kancane ukhuphuke ube yingxenye yezipuni zikafulawa. Isifundo ngasinye samasonto amabili kufanele sithathelwe indawo isonto lokuphumula, ngemuva kwalokho ukwelashwa nge-baking soda kungaqhubeka.
Ukusetshenziswa kwangaphandle kwe-sodium bicarbonate kwenzeka ngesimo samafutha okubulala amagciwane, angasetshenziswa ukwelapha ukulimala, ukusha, ukusika nezilonda zesikhumba. Inqubo ekulesi simo yile elandelayo:
okokuqala udinga ukulungiselela i-baking ejwayelekile yokubhaka kanye nebha yesepha yokuwasha enamafutha angama-72%,
uhhafu we-bar kumele ugcotshwe, uthele uhhafu wengilazi wamanzi bese ubilisa esitsheni esincane, ulinde ukuthi ancibilike,
ngemuva kokuthi ikhambi selipholile, engeza i-tsp eyodwa. i-soda kanye namaconsi amahlanu we-glycerin, bese uxuba kahle,
ngemuva kokuqina, amafutha aselungele ukusetshenziswa: ngemuva kokulapha isilonda nge-hydrogen peroxide, kusetshenziswa umuzwa wokuthambisa kuwo,
indawo enamafutha esikhunjeni ayikwazi ukugoqwa, ishiye ukufinyelela komoya-mpilo, okuzosheshisa ukomiswa kwendawo elimele. Ngokushiswa okuthe xaxa, kuvunyelwe ukususa ingxenye yamafutha afakiwe kusetshenziswa izicubu ze-gauze eziyinyumba,
amafutha kufanele afakwe esikhunjeni kanye ngosuku ngesigamu sehora.
Akunaziphikiso ezichazayo ngokusetshenziswa kwesoda yokubhaka, ngaphandle kwezifo zesisu esesigabeni esibuhlungu noma ukuba khona kwe-acid etholakele ye-acid esiswini esigulini, okuzoyinciphisa i-powder kufinyelele ezingeni elibucayi lapho selidliwe. Kumele njalo ubheke amathuba wokungabekezelelani komuntu ngamunye entweni leyo. Odokotela abayikhuthazi eyokunquma imithamo ye-baking soda bebodwa, futhi bayinikeze izingane ezincane nabesifazane abakhulelwe (noma abancashisayo).
Ukuthintana isikhathi eside ne-powder enesikhumba esinempilo kungabangela ukusabela kokungezwani komzimba, futhi ukuxhumana ngokunganaki nge-sodium bicarbonate emehlweni noma olunye ulwelwesi lwama-mucous kungavusa ukuqhuma, ukushiswa nokuqothuka.
Umphumela we-acidity kushukela
Ku-mellitus yesifo sikashukela, i-sodium carbonate ihlanza kahle amathumbu emikhiqizweni yokubola ye-acid. Lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba ngalesi sifo, iziguli zithola izinkinga ngesibindi, futhi ngeke sisakwazi ukubhekana nomsebenzi wazo ngokugcwele. USoda uphendula umbuzo wokuthi ungawehlisa kanjani ushukela ekhaya.
Kamuva, leli qiniso lizoba nomthelela omubi kakhulu kumanyikwe, okuzobe kungasebenzi kahle futhi kuyeke ukukhiqiza i-insulin ye-hormone ngamanani afanele. Ngakho-ke ushukela wegazi ophakeme nazo zonke izingqinamba zesifo sikashukela.
Ukwelashwa kweSoda ngokusho kukaNeumyvakin
U-Ivan Pavlovich Neumyvakin, usosayensi odume umhlaba wonke, waziwa njengochwepheshe kwezinye izindlela zokwelapha. Ubhekisisa ngokukhethekile izindlela imvelo ezinikeze umuntu.
Ukwelashwa kwendawo yonke kwezifo eziningana, ngokusho kukaNeumyvakin, kuyinto ejwayelekile yokubhaka, futhi uprofesa umnika indawo ekhethekile indlela yakhe yokwelapha isifo sikashukela sohlobo II. Incwadi yakhe "Soda - Myth or Reality" idume kakhulu phakathi kwabafundi.
I-Baking soda ingalashwa ngesifo sikashukela, siyithathe ngaphakathi, nangaphandle ngokugeza ngokwelapha nangamafutha okugcoba. Kodwa-ke, ukukhetha i-sodium bicarbonate njengokwelashwa, kuyadingeka ukubonisana nodokotela wakho, ngoba kumele afakwe kwiphakeji yezinyathelo futhi akuyona izindlela eziphambili zokwelashwa.
Yiziphi izinzuzo zeshukela kushukela
Ukwelashwa kweSoda ngesifo sikashukela kungahlehlisa izinto eziningi eziyingozi ngaphakathi emzimbeni. Ngakho-ke, i-sodium carbonate kufanele ithathwe kalula nge-dilution ngamanzi noma ukuphathwa kwe-intravenous.
Kumuntu ophile kahle, izinga le-acidity likuhlu lwamayunithi angama-7.3-7.4. Uma ngabe le nkomba inyuka, sekuyisikhathi sokuqala ukwelashwa nge-baking soda.
Le nto izosiza ekunciphiseni i-acidity ephezulu futhi isindise umzimba kumagciwane namagciwane.
Yini ongayenza nge-soda
Esikhathini samanje odokotela banamuhla, kunemithi esebenza ngempumelelo nezinye izindlela zokwelapha, ngakho odokotela akuvamile ukuthi basebenzise i-sodium carbonate ekwelapheni iziguli ezinesifo sikashukela.
Kodwa uma umuntu uqobo efuna ukuthola imiphumela ethile kumenzeli osizayo, kufanele aphethulele ukunaka kwakhe ekubhaka i-baking.
Njengoba umkhiqizo utholakala kuwo wonke umuntu ngaphandle kokukhetha futhi uhlala ukhona kunoma iyiphi ikhishi, ngeke kube nzima ukuthi isiguli sithathe izipuni ezimbalwa zaleli philisi lokuphilisa isonto.
Lokhu kumele kwenziwe zombili ukuvikela isifo sikashukela, futhi uma isifo sesivele sifikile.
Yiziphi izinzuzo zeshukela noshukela wegazi ophezulu? Nazi:
I-Sodium carbonate ishibhile, ngakho-ke ukwelashwa nge-soda ngeke kushaye isabelozimali somndeni.
Ngo-soda, kungenzeka ukwehlisa izinga le-acid.
I-Soda icindezela ukushisa kwenhliziyo ngempumelelo, futhi izindonga zesisu ziyahlanzwa.
Izindlela zokusebenzisa isoda lokubhaka ngesikhathi seMpi Yezwe yokuQala zikufakazisile ukusebenza kwalokhu, kusukela ngaleso sikhathi kuncane okushintshile.
Akekho udokotela ozodumaza isiguli ekusebenziseni usawoti, ngoba izinzuzo zomkhiqizo zisobala kakhulu.
I-Sodium carbonate enoshukela owengeziwe egazini izovikela ngokuthembekile umzimba wesiguli kusuka emizweni evuthayo engathandeki nokungaphatheki kahle esiswini, isekele amasosha omzimba futhi isize imvimbele kulesi sifo.
Ukwelashwa kweSoda nokuqapha ukusetshenziswa kwayo
Ukuxhumana isikhathi eside kwesikhumba kubangela ukucasuka.
Kunobufakazi bokungezwani komqondo nalokho okwenziwe kulokho.
I-Sodium carbonate ingumkhiqizo we-caustic kakhulu, ngakho-ke akufanele ivunyelwe ukungena emehlweni.
Lapho upheka imifino, isoda ayinconywa ukuba ingezwe emanzini, ngoba ichitha amavithamini nezakhi zomzimba.
Ukuthatha i-soda noma cha kukuwe wonke umuntu ukuthi athathe isinqumo. Kodwa kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi, ngokuya ngomthamo ofanele, into ezozuzisa kuphela.
Isiphetho kanye neziphetho
Ukwelashwa kwesifo sikashukela nge-soda kufanele kwenziwe ngokuqinile ngokwemiyalo engatholakala kwi-Intanethi. Kodwa noma kunjalo, ngaphambi kokuqala ukwelashwa, kufanele uthintane nodokotela ovumayo noma odokotela abasebenza ngezokwelapha.
Lokhu kuqapha kuzosiza isiguli sigweme imiphumela engaba khona.
Ukwelashwa kungenzeka nini?
Yize iqiniso lokuthi indlela yokuqanjwa kwesifo sikashukela iqondakala kahle, kusenzima ukuthola ikhambi lokulwa nalesi sifo esikhohlisayo. Le pathology ehambisana nomsebenzi we-pancreatic okhubazekile, ibhekene nabantu abaningi, ikakhulukazi asebekhulile basengozini. Kunezinhlobo ezimbili zesifo sikashukela:
Owokuqala uncike kwe-insulin futhi ungumphumela wokukhiqizwa okunganele ngamaseli wesibindi e-hormone ahileleka ku-carbohydrate metabolism. Ukulawula lesi sifo, lezi ziguli zidinga ukusetshenziswa kwe-insulin njalo,
Okwesibili -ingancikile kwi-insulin. Ukulungisa lesi simo, kwanele ukuthi lezi ziguli zinamathele ekudleni ngamaphesenti aphansi ama-carbohydrate futhi zisebenzise izidakamizwa ezibekiwe. Kulokhu ukuthi ukwelapha ushukela nge-soda kunikeza imiphumela emihle.
Ukwanda koshukela wegazi kuholela ekwandeni kokuxineka kwemizimba ye-ketone, okucasulayo i-acidization yemvelo yangaphakathi yomzimba (ukuguquguquka kwesilinganiso se-acid-base ohlangothini lwe-acid). Ngezinkomba ezinjalo ze-acidity, isistimu yezinzwa ephakathi iyenqaba ukusebenza ngokwanele, futhi umuntu ulahlekelwa ukwazi. Usebenzisa isixazululo sosawoti ophathwe ngaphakathi (uma umuntu ekwazi, ungaphuza), i-pH ingahle yenziwe ejwayelekile, esiza ukuphuma ku-coma.
Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zivame ukubonakala ngokukhuphuka kwesisindo somzimba, isibindi esikhubazekile kanye namanyikwe. Baqala indlela yokuphila yokuhlala nokulutha komlutha ngokugcizelelwa kwama-carbohydrate asheshayo, banezihlobo eziseduzane emndenini onesifo esifanayo.
Isoda enesifo sikashukela yenza ukuthi ikwazi ukuqeda uketshezi olwedlulele, ngaleyo ndlela inciphise ukumuncwa kwamafutha. Le mpahla ye-sodium bicarbonate isetshenziswa ngokuqinile ezindleleni zokunciphisa umzimba, okubaluleke kakhulu ekwelashweni kwesifo sikashukela.
Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, iziguli ziyalulekwa ukuthi ziyogeza ngamanzi ngekhambi le-soda, kepha lokhu kufanele kwenziwe kuphela ngemuva kokubonisana nodokotela kuqala futhi uqiniseke ukuthi akukho okuphikiswa, kufaka phakathi:
kwandise ukuzwela komuntu ngamunye ku-sodium bicarbonate
ukuba khona kwezifo ezisunguliwe ze-oncological
ukukhulelwa nokuncelisa ibele
ukuba khona kwezifo zomgudu wokugaya ukudla (izilonda, i-gastritis)
ukukhiqizwa okunganele kwe-hydrochloric acid ngamangqamuzana esisisu (i-acidity ephansi)
ukungabikho kokulungiswa kwe-aluminium ne-magnesium ku-regimen yokwelashwa.
I-Baking soda ayikwazi ukwelapha isifo sikashukela, kepha umuntu osisebenzisayo angalawula lesi sifo, agweme izinkinga nezimpawu eziqinile kakhulu. Ukwelashwa nge-baking soda yohlobo 2 sikashukela kunomthelela omuhle ngenxa yemiphumela elandelayo:
kushintsha i-acidity yejusi esiswini
ibuyisela uhlelo lwezinzwa
yenza kube lula ukusebenza kweminyango yohlelo lwe-lymphatic
iguqula inkambiso yezinqubo ze-metabolic
ihlanza imithambo yegazi nezitho zangaphakathi kusuka kunobuthi obunqwabelene kanye nobuthi
kuvimbela ukukhula kwamagciwane lapho kukhona izilonda ezivulekile zesikhumba nolwelwesi lwama-mucous
Abantu abaphila ezweni lanamuhla badla kakhulu ukudla okucolisisiwe, kanti nokudla kugcwele ama-carbohydrate. Lokhu, kuholela ekwandisweni kwe-asidi ehlukahlukene - i-acidization yomzimba, okudala inhlabathi evumayo yokuthuthukiswa kwezifo eziningi.
Ungayisebenzisa kanjani isoda
Ngaphandle. I-sodium bicarbonate solution isetshenziselwa ukugeza. Inqubo akufanele ihlale isikhathi esingaphansi kwemizuzu engamashumi amabili, futhi izinga lokushisa lamanzi liguquka ngaphakathi kwama-degree Celsius angamashumi amathathu nesishiyagalombili. Amagremu angamakhulu amahlanu kashukela kufanele athathe ukugeza okukodwa komthamo ojwayelekile. Inkambo yokwelashwa izinsuku eziyishumi. Ukwelashwa kwamanzi kwenziwa nsuku zonke. Ukubuyekezwa kwale ndlela kuhamba kahle. Akuvumeli nje kuphela ukuthi ujabulele, kodwa futhi kwenza ukuthi kususwe okungenani amakhilogremu amabili wesisindo ngokweqile kwinqubo eyodwa, ebaluleke kakhulu ezigulini ezihlaselwa yile ndlela yokuzivocavoca. Futhi, uma ufaka amaconsi ambalwa kawoyela obalulekile emanzini okugeza, ngaphezu kwalokho uzothola umphumela we-tonic noma opholile. Ngaphezu kwalokho, imvelo ye-alkaline engaphezulu kwesikhumba inomphumela we-bactericidal, icindezela i-microflora ye-pathogenic kanye nokukhuthaza ukuphulukiswa kwenxeba.
Ngaphakathi. Uma udokotela ohambelayo ejwayele izinhlelo zakho zokusebenzisa isoda futhi engazwisi ukunqatshelwa ngokwezigaba, ungazama ukuphuza isixazululo se-sodium bicarbonate, ngokuqala ngomthamo omncane futhi kancane kancane ukhuphule ukuqina. Ngosuku lokuqala lokwelashwa, i-soda powder ebekwe emaphethelweni esinqeni iyacinywa ½ inkomishi yamanzi ashisayo, bese ihlanjululwa ngamanzi abilayo abilayo abe ivolumu ephelele. Udinga ukuphuza lo makhambi ku-gulp eyodwa esiswini esingenalutho. Ngemuva kwalokho, ngamahora angamashumi amabili nane, udinga ukubheka isimo sezimpawu ezingafuneki (isiyezi, isicanucanu, i-hypotension, ubuhlungu esifundeni se-epigastric). Uma konke kuhamba kahle, ukwelashwa kuyaqhubeka nsuku zonke isonto. Ngemuva kwalokho, umthamo we-soda ungakhuphuka ube yingxenye yezipuni ngosuku. Ngemuva kokuqeda isifundo samasonto amabili, udinga ukuthatha isikhathi sekhefu. Ngemuva kokuhlolwa kwegazi lokulawula ushukela nokuzimisela kwe-acidity, ukwelashwa kungaqhubeka. Ngenhloso yokuvimbela, isisombululo se-soda sokuhlushwa okungenhla singathathwa kanye ngesonto kukho konke impilo.
Ngegazi. Le ndlela isetshenziswa esimweni esibucayi lapho umuntu esevele ukhubazekile. I-Soda yesifo sikashukela kuleli cala ngeke isetshenziswe yodwa ekhaya. Izisombululo ezikhethekile ezenziwe ngefekthri ziyasetshenziswa lapha, ezibandakanya i-sodium bicarbonate. Imvamisa, ukwelashwa kwenziwa ngemodi ebanzi, lapho izixazululo zifakwa emzimbeni ngehora, noma nangaphezulu, kuze kube yilapho kwenziwa ngcono.
Ukuzijwayeza kukhombisa ukuthi i-sodium bicarbonate kulula ukuyisebenzisa, isabelomali, futhi kwesinye isikhathi okuwukuphela kwensiza etholakalayo ekulweni nesifo sikashukela sohlobo 2 nezinye izimo zengqondo. Kepha akunakuthathwa njengendlela yokuzimela. Uma kungekho okubhekisana nakho, khona-ke kungcono ukuyisebenzisa ngokuhambisana nokwelashwa kwezidakamizwa noma, njengendlela yokuvimbela.
Ekhaya, kulungiswa isixazululo esilandelayo:
Thela isigamu seglasi lamanzi ashisayo.
I-baking soda (cishe ikota yesipuni) iyenezelwa kukho empeni yommese.
Faka amanzi abandayo ukwenza ingilazi igcwale.
Isazi esidumile emhlabeni jikelele u-Ivan Pavlovich Neumyvakin uchwepheshe kwezokwelapha futhi ukholelwa ukuthi ukwelashwa kwezifo kufanele kwenziwe ngosizo lwendalo. Kuyiqiniso, kulo msamo, i-soda iyathandeka ikakhulukazi, lapho isazi sokufunda sichithe incwadi ebizwa ngokuthi "Soda - Myth or Reality."
Kuyo, uNeumyvakin uphawula ukuthi isifo sikashukela siholela ekwandeni kwe-acidity, ngaleyo ndlela siphazamise izinqubo ze-metabolic. Baking soda kungenza umsebenzi womzimba kube njalo ngokuqinisa isisu se-acid.
UNeumyvakin uncoma ukuthi ngaphambi kokuqala ukwelashwa kwesifo sikashukela nge-soda, kufanele ahlolwe ngodokotela ukuze ahlonzeke izifo ezingahle ziqhamuke ngenxa yokusebenzisa isoda.
Ngaphezu kokungenisa, i-sodium bicarbonate ingasetshenziswa ngaphandle. Ikakhulu ikhambi lizosebenza uma, ngesisekelo saso, kugcotshwa i-oli yokupholisa inxeba lokwelapha.
Ngemuva kwakho konke, njengoba wazi, kubantu abahlaselwa yilesi sifo izicubu zanda kabi, ngenxa yalokho amanxeba aphola isikhathi eside. Ungalungisa uwoyela owelaphayo nge-sodium bicarbonate ngokweresiphi engezansi.
I-72% insipho yokuhlanza,
Grate uhhafu wecezu lokuwasha elondolo ku-grater ethambile, ubeke umkhiqizo ochotshoziwe endishini bese ugcwalisa ngamanzi. Faka ingxube emlilweni omncane bese ubilisa lapho insipho iqala ukuncibilika, amagremu ama-5 kashukela namadonsi ama-5 e-glycerin kumele afakwe ezintweni ezingavuthiwe, hlanganisa kahle. Cima umkhiqizo uwenze upholile.
Ukusetshenziswa kwe-sodium bicarbonate
I-Sodium bicarbonate iyindlela enhle yokwelapha isifo sikashukela, kepha, njengazo zonke izinto, ingahle ihlolwe abanye abantu. Contraindication nokusetshenziswa kweshukela sikashukela kungaba ngale ndlela elandelayo:
Ukungabekezelelani komuntu ngamunye kwe-sodium bicarbonate.
Ukuvela kwesifo sikashukela sohlobo 1.
Ukuba khona komdlavuza.
Isikhathi sokukhulelwa nokukhulelwa.
I-Pathology yendlela yokugaya.
Izifo ezingamahlalakhona esigabeni esibuhlungu.
Kwehla i-acidity yejusi esiswini.
Ukuthatha umuthi nge-aluminium ne-magnesium.
Uma umuntu ene-contraindication, khona-ke ukwelashwa nge-soda kungcono ukungafaki.
Abantu abaningi abanesifo sikashukela abazi ukuthi belashwa kanjani nge-soda, kungenzeka yini ukuphuza i-soda enesifo sikashukela, noma kungcono ukuhlela ukwelashwa kwangaphandle. Ukuqonda ukuthi ungaphuza kanjani isoda, nazi izindlela zokupheka ezilula ezingasetshenziswa yilowo nalowo onesifo sikashukela.
Ukwelapha isifo sohlobo 2 “esimnandi” ngo-soda, udinga ukuqala ukwelashwa ngenani elincane le-powder, ngemithamo ephansi kakhulu. Ukuphuza i-sodium bicarbonate kufakwa engilazini yamanzi (engashisi) empeni yommese. Govuza futhi uphuze kokukodwa. Emini, baqapha ukusabela komzimba.
Isifo sikashukela kufanele sikuyeke ukusetshenziswa kwesoda, uma kukhona:
Izifo ze-pheshana emathunjini
kwehla i-acidity yesisu.
Ngakho-ke, ngaphambi kokuthatha i-soda ukunciphisa i-acidity emzimbeni, konke kumele kuvunyelwe nge-endocrinologist. Ngaphezu kwalokho, zonke izinqubo zokwelashwa nge-soda kufanele zenziwe ngaphansi kokuqashwa ngokuqinile kodokotela, ngoba ukuzelapha kungalimaza ngisho nomzimba ogulayo.
Kubukezwe ngu-Arthur. Nginqume ukuphathwa ukwelashwa ngokusho kwendlela yeNeumyvakin. Ngiphuza isisombululo se-soda kanjena: ¼ isipuni esincane engilazini yamanzi ngasikhathi sinye izinsuku ezintathu. Okulandelayo, phazamisa izinsuku ezintathu, bese uqhubeka nesifundo ngomthamo owandayo. Angibonanga lutho olungaphezulu kwemiphumela, kodwa sengingasho impela ukuthi izinkinga zokushiswa kwenhliziyo nokuqhakaza kumile. Ngizobona ukuthi kwenzekani ngokulandelayo.
Kubukeza uPauline. Sekuphele izinyanga eziningi ngiphuza ushukela, ezifundweni. Kunemiphumela. Ukuhlanza ngemuva kokugaya sekuthuthukile, akukho ukuqhakaza, ukubanda sekube buhlungu kancanyana. Phambilini, ku-hypothermia yokuqala, umphimbo wawugula. Manje umzimba ubhekana nale nkinga, futhi konke sibonga nge-soda.
Kubukezwa nguDmitry. Umngani unesifo sikashukela. Uthatha isoda isikhathi eside futhi athi uzizwa engcono kakhulu, nginqume ukuyiphinda le mpumelelo yakhe, kepha kuze kube manje angikaze ngibone lutho olukhethekile maqondana nokwenza ngcono impilo.
Abantu abaningi bakhetha ukuphuza i-soda kusixazululo sikashukela. Kepha lokhu akuyona i-panacea ekhulula ukugula, kepha yithuluzi elenza ngcono isimo futhi lokwenza umsebenzi wazo zonke izitho zangaphakathi nezinhlelo zisetshenziswe ngendlela efanele. Usebenzisa i-sodium bicarbonate powder, kufanele ulandele imiyalo futhi ungeqi umthamo.
Ukusetshenziswa kwesoda ejwayelekile kushukela kubangelwa izici zayo eziningi ezizuzisayo, sibonga ukuthi umuntu angakwazi ukubhekana nemiphumela eminingana ebangelwa ukuphazamiseka kwe-endocrine. Lezi zakhiwo yilezi:
i-alkalization yokuqukethwe esiswini kanye nokunye uketshezi lomzimba okufihliwe,
ukususwa koketshezi olwedlulele,
ukunciphisa ijubane inqubo ukumuncwa kwamafutha, esiza ukunciphisa umzimba,
ukwenza ngcono ukusebenza kohlelo lwe-lymphatic,
ukuhlanzwa kwezitho zangaphakathi nemithambo yegazi kusuka kubuthi nezinto ezinobuthi,
ngisize ngokushaya kwenhliziyo, i-gastritis, izilonda kanye nobuthi,
umphumela we-antibacterial lapho welapha amanxeba, ukushiswa okukhanyayo, ukulunywa yizinambuzane, nalapho uhlaba umlomo nekhala,
amazinyo koqweqwe lomhlophe.
Akuyona imfihlo ukuthi abantu abaningi bahlanganisa ngokungalungile imikhiqizo yokudla futhi balayisha kakhulu umzimba nama-carbohydrate, ngenxa yalokho “amasobho” ngenxa yokungezwani kwawo siqu kanye ne-asidi ekhiqizwa lapho kubila ukudla. Ezimweni ezinjalo, uhlelo olubalulekile luvele nje ludinga i-alkali ukubuyisela ibhalansi ye-acid nokuvimbela ukuqala kwesifo sikashukela. Ezimweni eziningi, ukusetshenziswa okunekhono kwe-soda ejwayelekile yokuphuza kwanele.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela nge-soda kungenzeka kuphela ngemuva kokubonana nodokotela, futhi kungcono kakhulu ukuhlolwa ngokuphelele kwezokwelapha, ngoba i-sodium bicarbonate iyithuluzi elinamandla elingasiza nobabili isifo sikashukela futhi sibangele ubunzima kwezinye izifo.
Kuhle ukwenqaba ukusebenzisa i-soda ezimweni ezilandelayo:
ukuzwela okukhethekile ku-soda noma ukungabekezelelani kwayo,
ukuba khona kwesifo sikashukela sohlobo 1,
i-gastritis kanye nesilonda
ukwanda kwanoma yiziphi izifo ezingamahlalakhona,
ukukhulelwa nokuncelisa ibele.
I-Soda ayilaphesi isifo sikashukela, kepha ingasiza ekuthuthukiseni izinqubo ze-metabolic, yenze ubuthi bungabi namandla emzimbeni, futhi igculise umzimba ngamandla futhi isheshise ukufakwa kwemithi nezinye izithasiselo ezisebenzayo.
Ukulwa nokukhuluphala ngohlobo 2 sikashukela, kusetshenziswa amabha okugeza nge-sodium bicarbonate. Isifundo sinezinsuku eziyi-10, lapho kuso sonke isidingo sokugeza isoda imizuzu engama-20. Ukushisa kwamanzi akufanele kudlule i-38 ° С. Ngaphambi kweseshini, amagremu angama-500 e-baking soda ancibilikiswa emanzini. Ukwehla kwesisindo ngenkathi ugeza kungafinyelela kumakhilogremu amabili.
Ngokuhambisana nokugeza, ungaqhuba iseshini ye-aromatherapy. Ukuze wenze lokhu, vele ungeze ama-10 - 15 amaconsi kawoyela owuthandayo abalulekile emanzini. Izinqubo ezinjalo zamanzi azimnandi nje kuphela, kodwa futhi zinganciphisa isimo sesiguli esinesifo sikashukela, sinciphise ukucindezeleka futhi sibe nomphumela omuhle ekulaleni, okubaluleke kakhulu ukusheshisa inqubo yokuvuselela umzimba ngemuva kokuxhamazela.
Ungaqala ukuthatha i-sodium bicarbonate ngaphakathi ngemithamo emincane kuphela. Ngokokuqala ngqa, kwanele ukuncibilikisa isobho elincane esicelweni sommese engxenyeni yengilazi yamanzi abilayo abilayo. Isixazululo esiphumela sihlanjululwe ngenani elifanayo lamanzi abandayo (kutholakala ingilazi ephelele) futhi badakiwe bonke ngasikhathi sinye. Uma ingekho imiphumela emibi ngemuva kosuku (isiyezi, isicanucanu, isisu esibuhlungu, umfutho wegazi ophansi), isixazululo esinjalo sithathwa isonto lonke, bese kuthi inani le-soda lenyuke lifinyelele kuhafu wesipuni ngosuku.
Ngemuva kwamaviki amabili, udinga ukuthatha ikhefu, bese-ke, ngemuva kokulinganisa inani likashukela egazini futhi unqume izinga le-acidity, uyiphinde yonke le nkambo futhi.
Ukuvimbela i-acidization yomzimba, kunconywa ukuthatha isixazululo esinjalo kanye ngesonto kukho konke impilo.
Enye indlela yokusebenzisa i-soda ngempumelelo kungaphandle. Kuyaziwa ukuthi izinqubo zokuvuselelwa kweziguli ezinesifo sikashukela zihamba kancane kunabantu abaphilile. Ukuqunjelwa, amanxeba, ukushiswa nokulimala ezigulini kungalulama amasonto. Ngaphezu kwalokho, kwesinye isikhathi isifo sikashukela sihlushwa ukuvela kwezilonda emaphethelweni, lapho ukutheleleka kungangena khona futhi kubangele inqubo yokuvuvukala.
Ukuze ugweme imiphumela enjalo, iziguli ezinesifo sikashukela zingathola ukusetshenziswa kwekhambi le-soda ezimweni ezinjalo - kwanele ukwelapha umhlaba olimele nawo. Okwezokuqinisa kanye nezinxeba ezingapholi, i-compress efakwe kusisombululo kufanele igcinwe imizuzu engama-30 kuye kwengama-40. Emvelweni we-alkaline, ama-virus amancane ayingozi azofa. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, isilonda sizoqina.
Ukwelashwa nge-baking soda yesifo sikashukela kuyasebenza futhi kuphephile, kuncike kuzo zonke izincomo zokusetshenziswa kwayo. Ngaphambi kokuqala ukwelashwa nge-sodium bicarbonate, kubaluleke kakhulu ukuthi uhlolwe futhi uthintane nodokotela wakho.